Intshayelelo yeNkampani | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.
UJiangsu Shuangyang Isixhobo sezoNyango Co, Ltd. yasekwa ngo-2001, ithatha indawo ka-18000 m2 , kubandakanya indawo yomgangatho ongaphezulu kwe-15000 m2. Imali yayo ebhalisiweyo ifikelela kwizigidi ezingama-20 zeYuan. Njengeshishini lesizwe elinikezelwe kwi-R & D, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo yokufakwa kwamathambo, sifumene amalungelo awodwa abenzi belizwe.
Titanium kunye neetanium alloys zizinto zethu ezibonakalayo. Senza ulawulo olungqongqo lomgangatho, kwaye sikhethe iimveliso ezaziwayo zasekhaya nezamazwe aphesheya, ezinje ngeBaoti kunye neZAPP, njengababoneleli bezinto zethu eziluhlaza. Okwangoku, sixhotyiswe ngezixhobo zemveliso ekumgangatho wehlabathi kunye nezixhobo kubandakanya iziko lokuchwetheza, uqhoqhoqho, umatshini wokugaya we-CNC, kunye nokucoca i-ultrasonic, njl njl, kunye nezixhobo zokulinganisa ezichanekileyo kubandakanya umvavanyi wehlabathi, umvavanyi we-elektroniki kunye neprojektha yedijithali, njl. Enkosi kwinkqubo yokuphatha ephucukileyo, sifumene i-ISO9001: Isatifikethi se2015 seNkqubo yoLawulo loMgangatho, i-ISO13485: iSatifikethi se2016 seNkqubo yoLawulo loMgangatho yezixhobo zezoNyango, kunye nesatifikethi se-TUV se-CE. Sikwabokuqala ukuphumelela uhlolo ngokwemiqathango yoMthetho woNyanzeliso (uPilot) wezixhobo zoNyango ezinokuTyalwa zeZinto eziLungileyo zokuThengiswa kwezixhobo zoNyango eziququzelelwe liZiko likaZwelonke ngo-2007.
Enkosi kwisikhokelo esibukhali kunye neenkxaso ezivela kwiingcali zamathambo, oonjingalwazi kunye neeklinikhi, sisungule iimveliso ezihamba phambili ezenzelwe iindawo ezahlukeneyo zamathambo, kubandakanya nokutshixa inkqubo yamathambo, inkqubo yokulungiswa kwethambo lesitanium, isitayile se-titanium esenziwe ngethambo kunye ne-gasket, i-titanium sternocostal Inkqubo, ukuvala inkqubo yokulungiswa kwangaphakathi kwangaphakathi, inkqubo yokulungiswa kwangaphakathi kwe-maxillofacial, inkqubo yokubopha i-titanium, inkqubo ye-anatomic titanium mesh, inkqubo ye-thoracolumbar ye-screw-rod, inkqubo ye-laminoplasty fixation kunye nezixhobo ezisisiseko, njl. iimfuno zeklinikhi. Amabango amakhulu afunyenwe asuka kwizonyango nakwizigulana ngenxa yemveliso ekulula ukuzisebenzisa enoyilo oluthembekileyo kunye nomatshini ococekileyo, onokuthi uzise ixesha elifutshane lokuphola.
Iphupha lase China kunye nephupha likaShuangyang! Siza kunamathela kwinjongo yethu yoqobo yokuba yinkampani eqhutywa yimishini, enoxanduva, enamabhongo kunye neyabantu, kwaye sihambelane nombono wethu "wokuziqhelanisa nabantu, ukuthembeka, ukuvelisa izinto ezintsha, kunye nokugqwesa". Sizimisele ukuba brand ephambili yesizwe kushishino Isixhobo zonyango. E-Shuangyang, sihlala sihlala wamkele iitalente ezinqwenela ukwenza ikamva eliqaqambileyo nathi.
Inokuthenjwa kwaye yomelele, ngoku simi kwinqanaba eliphezulu embalini. Kwaye inkcubeko yeShuangyang iye yaba sisiseko sethu kunye namandla okwenza izinto ezintsha, ukufuna ukugqibelela, kunye nokwakha uphawu lwesizwe.
Amashishini ahambelana noko
Ngethuba lokukhanyiselwa ukususela ngo-1921 ukuya ku-1949, i-orthopics yeyeza laseNtshona yayisencinci e-China, kuphela kwizixeko ezimbalwa. Ngeli xesha, kwaqala ukubonakala ubuchwephesha bamathambo, isibhedlele samathambo kunye noluntu lwamathambo. Ukusuka kwi-1949 ukuya kwi-1966, i-orthopedics ngokuthe ngcembe yaba sisikhundla esizimeleyo sezikolo eziphambili zonyango. Unyango lwe-Orthopedics lwasekwa kancinci ezibhedlele. Amaziko ophando lwamathambo asekwa eBeijing naseShanghai. Umbutho kunye noorhulumente bakuxhase kakhulu ukuqeqeshwa koogqirha bamathambo. I-1966-1980 lixesha elinzima, iminyaka elishumi yesiphithiphithi, umsebenzi weklinikhi kunye nomsebenzi wophando onzima kunzima ukuwenza, kuphando olusisiseko lwethiyori, ukutshintshwa ngokudibeneyo kunye neminye imiba yenkqubela phambili. Amalungu angengowamvelo aqala alinganiswa kwaye ukukhula kokufakelwa komqolo kuqalile ukuhluma. Ukusukela ngo-1980 ukuya ku-2000, kunye nophuhliso olukhawulezayo lophando olusisiseko nolwezonyango kuqhaqho lomqolo, utyando oludibeneyo kunye nonyango lwamathambo, isebe lamathambo le-Chinese Medical Association lasekwa, i-Chinese Journal ye-orthopedics yasekwa, kunye ne-orthopedic sub specialty kunye neqela lezemfundo zasekwa. Ukusukela ngo-2000, izikhokelo zichaziwe zaze zamiswa ngokomgangatho, iteknoloji iye yaphuculwa ngokuqhubekekayo, unyango lwezifo lwandiswe ngokukhawuleza, kunye noluvo lonyango luphuculwe. Imbali yophuhliso inokushwankathelwa ngolu hlobo: ukwanda kwesikali soshishino, ubuchule, ukwahluka kunye nokwenziwa kwamazwe.
Imfuno yesicelo samathambo kunye nesifo sentliziyo inkulu emhlabeni, i-37.5% kunye ne-36.1% yentengiso yebhayiloji yehlabathi ngokulandelelana; Okwesibini, ukhathalelo lwenxeba kunye notyando lweplastiki zezona mveliso ziphambili, zibalwa nge-9.6% kunye ne-8.4% yentengiso yezinto eziphilayo. Iimveliso zokufakelwa kwamathambo ikakhulu zibandakanya: umqolo, umothuko, ukudityaniswa kwamayeza, iimveliso zamayeza ezemidlalo, i-neurosurgery (i-titanium mesh yokulungisa ukakayi) Umyinge wokukhula komyinge ophakathi kwe-2016 kunye ne-2020 yi-4.1%, kwaye xa iyonke, imakethi yamathambo iya kukhula kwinqanaba lokukhula ye-3.2% ngonyaka. Izixhobo zamayeza zamathambo e China iindidi ezintathu eziphambili zeemveliso: amalungu, umothuko kunye nomqolo.
Uphuhliso lwendlela yezinto eziphilayo zamathambo kunye nezixhobo ezinokufakwa:
1. Iitissue indened biomaterials (composite HA coating, nano biomaterials);
2. Ubunjineli beethishu (izinto ezifanelekileyo zeskerafu, iintlobo ezahlukeneyo zeseli yeziqu ezibangela ukwahlulahlula, izinto zokuvelisa amathambo);
3. Unyango lwe-Orthopedic regenerative (ukuphinda kuhlaziye izicubu zethambo, ukuvuselelwa kweethambo);
4. Ukusetyenziswa kwee-nano biomaterials kwi-orthopedics (unyango lwethumba);
5. ulwenziwo wena (3D technology yoshicilelo, ubuchwepheshe machining ngqo);
6.Ii-Biomechanics zamathambo (ukwenziwa kwe-bionic, ukulingisa kwekhompyuter);
7. Itekhnoloji engenayo encinci, itekhnoloji ye-3D yokuprinta.